Ubuchwepheshe - i-Geofumadas
Ubuchwepheshe be-CAD. Isofthiwe yobunjiniyela bomphakathi
Amadolobha edijithali - ukuthi singawasebenzisa kanjani ubuchwepheshe obunjengalokho okunikezwa yi-SIEMENS
Ingxoxo eSingapore yaseGeofumadas eno-Eric Chong, uMongameli kanye no-CEO, u-Motorola Ltd. Ngabe u-Nokia wenza kanjani umhlaba ube namadolobha ahlakaniphile? Imiphi iminikelo yakho eyinhloko evumela lokhu? Amadolobha abhekana nezinselelo ngenxa yezinguquko ezilethwe yi-megatrends yedolobha, ukuguquka kwesimo sezulu, ukusatshalaliswa komnotho emhlabeni kanye nokubuswa kwabantu emhlabeni jikelele. Kuzo zonke izinto eziyinkimbinkimbi, bakhiqiza ...
BIM egeomates yami
I-AulaGEO, inkambo enhle kakhulu enikezwa ochwepheshe be-Geo-engineering
I-AulaGEO isiphakamiso sokuqeqesha, esuselwa kunxanxathela lwe-geo-engineering, enamabhulokhi ajwayelekile ngokulandelana kweGeospatial, Ubunjiniyela kanye nokuSebenza. Indlela eyakhiwe ngayo isuselwe ku- "Course Courert", egxile emikhakheni; kusho ukuthi bagxila ekuzijwayezeni, ekwenzeni umsebenzi wesikole ezifundweni zamacala, mhlawumbe umongo womsebenzi owodwa kanye ...
cadastre I-FreeCAD QGIS
I-AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, cadastre, Ukufundisa CAD / GIS, Ubunginiyela, qgis
I-Geo-Engineering ne-TwinGeo Magazine - Uhlelo Lwesibili
Kufanele siphile isikhathi esijabulisayo sokuguqulwa kwedijithali. Kuzo zonke iziyalo, izinguquko zidlulela kokushiywa kwephepha okulula ekwenzeni izinqubo zifune ukusebenza kahle nemiphumela engcono. Umkhakha wezokwakha uyisibonelo esithandekayo, esiqhutshwa yisikhuthazo ngekusasa eliseduze njenge-Intanethi ...
Geospatial - GIS, Ubunginiyela, egeomates yami
Izindaba zeGeo-Ubunjiniyela - Unyaka Kwingqalasizinda - YII2019
Kuleli sonto, Inkomfa Yengqalasizinda Yonyaka - Umcimbi we-YII 2019 ubanjelwe eSingapore, onesihloko sawo esigxile kakhulu kwinqubekela phambili ebheke kwidijithali ngendlela yamawele ledijithali. Lo mcimbi ugqugquzelwa ngabakwa-900 Systems nababambisene namaqhinga iMicrosoft, Topcon, Atos ne-Nokia; ukuthi kubumbano oluhehayo esikhundleni ...
Ubunginiyela, Innovations, Microstation-Bentley
Ukuchazwa kabusha kwe-Geo-Engineering Concept
Siphila umzuzu okhethekile ekuvumelaneni kwemiyalo esekwe iminyaka. Ukucwaninga, ukwakhiwa kwezakhiwo, ukudweba imigqa, ukwakheka kwesakhiwo, ukuhlela, ukwakha, ukumaketha. Ukunikeza isibonelo salokho ngokwesiko kwakugeleza; ulayini olula, oqondisayo futhi onzima ukulawula amaphrojekthi ngokuya ngosayizi wamaphrojekthi. Namuhla, ngokumangazayo ...
Autodesk Bentley Systems BIM egeomates yami
STAAD - dala umklamo ongabizi futhi osetshenziselwe ukubekezelela izingcindezi zesakhiwo - iWest India
Itholakala endaweni eyinhloko yeSarabhai, i-K10 Grand yindawo yokwakha amahhovisi echaza amazinga amasha ezikhala zezentengiselwano eVadodara, eGujarat, eNdiya. Le ndawo ithole ukwanda okusheshayo kwezakhiwo zentengiso ngenxa yokuthi isondele esikhumulweni sezindiza sendawo kanye nesiteshi sesitimela. I-K10 iqashe Abacebisi beVYOM njengo ...
Sethula i-Geo-Engineering - Umagazini
Siyajabula kakhulu ukumemezela ukwethulwa komagazini we-Geo-engineering wezwe laseSpanishi. Izoba ne-periodicity yekota, uhlelo lwedijithali olwenziwe nge-multimedia okuqukethwe, ukulanda ku-pdf kanye ne-version ephrintiwe kwimicimbi emikhulu ehlanganiswe yi-protagonists yayo. Endabeni enkulu yalolu hlobo, igama elithi Geo-engineering lihunyushwa kabusha, njengalelo ...
Geospatial - GIS, Ubunginiyela, Innovations
Okuhamba phambili kwe-BIM Summit 2019
I-Geofumadas ihlanganyele komunye wemicimbi ebaluleke kakhulu emhlabeni jikelele ehlobene ne-BIM (Ukwakhiwa Kwamazwi Wokuwakha), kwakuyi-European BIM Summit 2019, ebanjwe ku-AXA Auditorium edolobheni laseBarcelona-Spain. Lo mcimbi ulandelwe yi-Experience BIM, lapho ungaba nombono walokho okuzofika izinsuku ...
Ngaphambi nokusetshenziswa kwecala le-BIM - Central America
Njengoba sise-BIMSummit e-Barcelona, ​​isonto eledlule selijabulise. Bheka ngezindlela ezahlukene, kusukela obusolisayo ukuze wemibono eziningi ziyavumelana ukuthi sikuye isikhathi esikhethekile inguquko izimboni ezisukela ensimini idatha bamba ukuba ukuhlanganiswa kwemisebenzi ngesikhathi ...
Uhlelo lwe-AEC Olulandelayo ne-SPAR 3D 2019 Lwamemezelwa
100 ziye umemezele izipikha inkomfa, kuhlanganise nezethulo amasha nge-National Geographic futhi IBM. Mashi 28 2019 (Anaheim, California, e-USA ..) - abahlela AEC Landelayo Technology Expo + lenkomfa kanye Expo & Conference 3D Spar, main co-indawo izenzakalo igxile ubuchwepheshe ngoba ...
I-Digital Water Works, Inc. ithola ukutshalwa kwezimali okuvela eBentley Systems
Utshalomali entsha kuzokhulisa khona global kokubili izinkampani kwingqalasizinda ukunikezela indle ngamanzi kamasipala kanye nebasebenti bangasese Denver, Colorado (United States), 1 Mashi 2019 - Digital Water Works, umholi womhlaba wonke e digital twins ingqalasizinda amanzi ezihlakaniphile, namuhla wamemezela utshalomali yamasu ...
Izindaba ze-3 nezenzakalo ze-21 ezibalulekile kumongo we-GEO - Ukuqala i-2019
I-Bentley, i-Leica ne-PlexEarth ziphakathi kwezintandokazi ezithakazelisayo kakhulu eziqala ngenyanga kaFebhuwari ye-2019. Ukwengeza, sibonisa ukuthi senze izenzakalo ezithakazelisayo ze-21 ezisendleleni, lapho umphakathi wonke wezochwepheshe ze-geoengineering ungabamba iqhaza. Ezinye zezihloko ezibhekiswe kulezi zenzakalo yi: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, ...
I-Leica Airborne CityMapper - isisombululo esithakazelisayo sebalazwe lamadolobha
Kungenzeka ukuthi angeke sibone i-SmartCity yeqiniso, nombono wayo. Kungenzeka ukuthi kunezidingo eziyisisekelo ezingaphezu kwezimo zethu kunokucabanga nge-intanethi yezinto. Ngisho, lokho abakhiqizi bezixazululo abakwenzayo, akekho oye wawacela. Iqiniso liwukuthi umncintiswano wokuzibeka uqobo ...
BIM I-DigitalTwin IoT umbono wami wokuqala I-SmartCities
Amakhono okwenziwa yi-Civil Engineer kumnikazi wokwakha
Lapho kuhlaziywa indlela yokubhekana nokuthuthukiswa kwalesi sihloko, isonto lami lokuqala njengenjiniyela wezomnotho lafika engqondweni ngokushesha; Ngemva komkhosi wokuphothula iziqu ngakhetha ukuvakashela futhi ngivakashele ugogo nomkhulu ngombono wokujabulela izinsuku ezimbalwa zokuthula. Iqiniso laliwukuthi ngolunye usuku, ngathola isifundo sokuthi ngemva kokuba ...
Ukuphathwa kweprojekthi: phakathi kwezinselelo umlingisi womphakathi ongafundile ekilasini
Lapho eqedile umsebenzi futhi ephothula njengenjiniyela, ukugcwaliseka kweminye imigomo abafundi bonke abasungula lapho beqala izifundo zabo zaseyunivesithi kuhlanganisiwe. Okubaluleke nakakhulu uma umsebenzi oqeda ukwenzeka endaweni enesithakazelo. Ubuchwepheshe bombuso ngumsebenzi wokuthi unyaka nonyaka ukhuthaza izinkulungwane ...
I-Bentley Systems ikhulisa ukuklanywa kanye nezincwadi ezinikezwayo ezakhiweni zekhonkolo ngokusebenzisa ukuthengwa kwe-S-Cube Futuretech
New ukuhlaziywa eziphambili amakhono kwesakhiwo ukhonkolo, umklamo kanye nezincwadi izixazululo Bentley Systems, Incorporated namuhla yamemezela yokufuna imibhalo isofthiwe kanye nomklamo ukwakhiwa ukhonkolo based e Mumbai Inkampani S-Cube Futuretech Pvt. Ltd. Ukwengeza S-cube zokusebenza Futuretech ubabonisa Bentley amadili oluthile ...
ikhasi 1 ikhasi 2 ikhasi 3 ... ikhasi 5 ikhasi elilandelayo